Zava-dehibe amintsika ny fiainanao manokana. Manao laharam-pahamehana lehibe izahay amin'ny fitazonana tsiambaratelo manokana.
Amin'ny fampidirana na fampiasana ny tranonkala OffshoreCompany.com, dia manaiky ny politikan'ny privacy of OffshoreCompany.com ianao, araka izay aseho etsy ambany.
Datiny farany novaina: 20th May 2018
Zava-dehibe ny fiainanao manokana.
Ny fampahafantarana manokana ataonay, raha manome azy, dia hampiasaina hifandray aminao, mandefa anao bebe kokoa momba ny vokatra sy ny serivisy, manome ny fahatanterahan'ny serivisy ary manome fampahalalana bebe kokoa amin'ny fangatahana.
Rehefa manome anao ny fampahalalana momba ireo tanjona ireo ianao, manaiky ny fanangonana sy ny fanangonana anay.
Tsy mizara ny fampahalalanao amin'ny antoko fahatelo izahay
Amin'ny fitsidihana ny tranokalanay, amin'ny fandefasana endriny an-tserasera ho fampahalalana bebe kokoa na fividianana serivisy iray, amin'ny fanomezana ny fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny mailaka, dia manaiky ny fanangonana sy ny fanodinana ny mombamomba anao manokana, PII, araka ny voafaritra eto.
General Controller Data Protection (GDPR) dia ny General Corporate Services, Inc.
Ny fampahalalana azonao dia omena amin'ny GDP
Ny fampahalalana manokana azo tsidihina azonao atao dia ny mandidy serivisy, mangataka fampahalalana bebe kokoa ary mahazo vaovao farany momba ny ara-dalàna amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fampiasana aterineto amin'ny www.offshorecompany.com.com (tranonkala), amin'ny alàlan'ny mailaka anay, miantso amin'ny finday, mampiasa mailaka mailaka na raha tsy izany dia mifandray aminay.
Ny fampahalalana manokana momba ny tena manokana izay omenao dia ny anaranao sy ny fampahalalana amin'ny fifandraisana, ny fepetra takian'ny lalàna momba ny asan'ny serivisy, ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny serivisy, ny fampitaovana ny fandefasana baiko sy ny saha rehetra ilaina mba hamenoana sy hametrahana tahirin-kevitra, toy ny; vaovao momba ny orinasa vaovao, vaovao vaovao azo itokisana sy ireo fepetra ara-dalàna momba ny lalàna.
Manolo-kevitra ny GDP isika (lahatsoratra 5)
Ny mombamomba ny tena manokana dia:
manitsaka ara-dalàna, ara-drariny ary amin'ny fomba mangarahara mifandraika amin'ny lohahevitra ('ara-dalàna, ara-drariny ary mangarahara');
voangona ho an'ny tanjona voatondro, mazava sy ara-drariny ary tsy azo ampiharina amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny tanjona; Ny fikarakarana fanampiny ho an'ny tetikasam-pandraharahana amin'ny tombontsoam-bahoaka, ny tanjona ara-tsiantifika na ara-tantara na tanjona eo amin'ny statistika, araka ny andininy 89 (1), dia tsy heverina ho tsy mifanaraka amin'ny tanjona voalohany ('famerana ny tanjona');
ilaina, voafetra ary voafetra amin'ny zavatra ilaina amin'ny fifandraisany amin'ny tanjon'izy ireo ('fampihenana ny data');
marina ary, raha ilaina, mitazona ny daty; Tsy maintsy atao ny dingana rehetra azo atao mba hahazoana antoka fa tsy misy diso ny angon-drakitra manokana, raha jerena ny tanjon'izy ireo, dia voafafa tsy misy hatak'andro ('marina');
mitazona amin'ny endrika izay mamela ny famantarana ny olom-pandaminana tsy mihoatra noho izay ilaina amin'ny tanjona izay arotsak'ireo data manokana; Ny angon-drakitra manokana dia mety ho voatahiry mandritra ny fe-potoana lava raha toa ka ny tatitra manokana no hikirakirana ho an'ny tetikasam-piraketan'ny tetikasa tombontsoa iombonana, siansa na siansa ara-tsiantifika na tanjona ara-tsosialy araka ny andininy 89 (1) ireo fepetra takiana amin'ity fitsipika ity mba hiarovana ireo zo sy fahalalahan'ny lohahevitra ('famerana fitehirizana');
dia atao amin'ny fomba izay miantoka ny fiarovana ara-pahasalamana ny angon-drakitra manokana, anisan'izany ny fiarovana amin'ny fanodinana tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna ary ny fanimbana tsy simba, ny fandringanana na ny fahavoazana, amin'ny fampiasana fepetra ara-teknika na fandaminana araka ny tokony ho izy ('integrity and confidentiality').
Mampiasa rafitra fampahalalana vaovaon'ny orinasa isika amin'izao fotoana izao mba hitazonana ny fampahalalana ny mpanjifa manohana ny filaminana nomerika maoderina sy ny mpitantana ny rafitra. Ny fikambanana misy antsika dia manana "DPO" mpiaro ny fiarovana ny data izay azo trandrahana amin'ny fampiasana ny fifandraisana pejy amin'ny tranonkala.
Mampiasa ny orinasan-drindra hafa izahay mba hampiantrano ny vohikalanay ary hanome ny fifandraisana, ny fandefasana, ny faktiora / ny birao sy ny fanodinana fandoavam-bola.
Mampiasa fomba amam-pitsaboana indostrialy izahay, fomba fanao tsara indrindra ary famarotana izay azo atao rehefa mahazo, mandefa ary manangona ny mombamomba anao.
Amin'ny fanomezana fampahalalana manokana, manaiky izany ianao.
Ny angona angatahinay rehefa mitsidika ny tranokalanay:
ny adiresy IP, ny navigateur, ny solosaina ary ny karazana ordinatera miaraka amin'ny fampitahana, plugins ary fampahalalana hafa
Ahoana ny fomba nandraisanao ny tranokala, daty sy fotoana hitsidihanao ny tranokalanay ary momba ny votoatiny izay jerena, ny tranonkala sy ny mombamomba ny motera.
Fizarana ny data
Tsy hampahafantatra afa-tsy ny fampahafantaranao fotsiny ianao na hanaraka ny lalàna mifehy na ny didim-pitsarana.
Raha manaiky ny fifandraisana amin'ny tranokalanay ianao, ny saha alefanao dia alefa any amin'ny serivisy CRF sy ny serivisy CRM ary ny serivisy fitantanana ny newsletters MailTimp. Ireo dia ny processeur-ny GDRE compliant processed.
Raha mailaka ianao, miantsoa telefaona na mifandray aminay amin'ny hafa, afaka mamaly amin'ny alàlan'ny mailaka izahay - ny servers dia nomen'i GoDaddy ary mampiasa ny rindrambaiko mailaka Microsoft Outlook izahay. GoDaddy sy Microsoft dia ireo processed data-drupe an'ny GRPR.
Ny processeur-n'ireo antoko fahatelo ampiasaintsika dia ny GDPR mifanaraka
Google - Email sy Website Analytics mpamatsy
SalesForce - CRM mpanome
GoDaddy - Web Host and Hardware Provider
GoogleDrive - Famolavolana Dokam-barotra
QuickBooks - Fanaraha-maso Software
Kaonty Merchant - Processor Paying
Ny fampahalalam-baovao ihany no mamoaka ny fampahalalam-baovao mifanaraka amin'ny lalàna na fikambanana orinasa.
Ahoana ny fampiasanay ny angon-drakitrao
Fampahalalana omenao anao dia ampiasaina hanomezana fahafaham-po ny fangatahana fampahalalana na tolotra rehetra, fanavaozana ny lalàna manan-kery manerantany, fampiroboroboana ary fanolorana.
Fampahalalana izay angoninay dia ampiasaina handinihana ny asan'ny tranonkalantsika ary hanatsara ny traik'efa ao amin'ny votoatiny sy ny mpampiasa, manara-maso ny fandaniana sy ny ezak'ireo dokam-barotra ary ny tolo-kevitry ny zana-bola.
Fampahalalana fahatelo Mety misy ifandraisany amin'ny fampahalalana nomenao na nangonina, mba hampiasaina mifanaraka amin'io politika manokana io.
Ny zonao eo ambany GPDR
Zo ho an'ny fampahalalam-baovao - Ny zo hanontaniana hoe inona ny angona manokana sy ny fomba ampiasaina azy.
Zo ny fidirana - Zo hijerena ireo angona manokanao.
Zo ho fanatsarana - Ny zo hanitsiana sy hanovana raha tsy havaozina izy io.
Ny zo hanaisotra ny fanekena - Ny zo hanafoana ny faneken'ny fanangonana sy fanodinana ny fampahalalana manokana.
Zo hitarika - Ny zo hitarika ny fanoheranao ny angon-drakitrao manokana dia atao.
Ny zo hanohitra ny fanodinana amin'ny automata - Ny zo hanohitra ny fanapahan-kevitry ny fanodinana otrikaina.
Ny zo tokony hohadinoina - Ny zo hangatahana ny angon-drakitrao.
Tsara ho an'ny fampitaovana ny fampitaovana - Ny zo hangatahana ny famindrana ny angon-drakitrao - ny angona dia tsy maintsy omena na ampitaina amin'ny format elektronika azo vidiana.
Hanamafy ny fampahalalana ny mpanjifa isika raha toa ka ilaina ny manatanteraka ny lamin'ny serivisy ary manamora ny fangatahana ary manaja ny fepetra takian'ny lalàna.
Mifandraisa aminay momba ny fanesorana ny data.
Fanambarana nataon'ny Minisitra teo ambany 16 taona
Ny faneken'ny ray aman-dreny dia takiana mialohan'ny hanomezana anao ny mombamomba anao manokana.
Atsaharo ny fanekenao
Mifandraisa amin'ny birao ary milaza fa fangatahana hanafoanana ny fanekena ny fanangonana sy fanodinana ny mombamomba anao manokana.
Sampana Fitadiavana Fanampiana (SAR)
Araka ny GDP,
Azonao atao ny mangataka mba handefa antsipiriany momba ny fampahalalana manokana ataontsika, na
Azonao atao ny mangataka mba hanatsara ny fifanoherana, na
Azonao atao ny mangataka antsika hamafa ny angon-drakitra rehetra.
Araka ny GDP, ny fangatahana rehetra dia omena maimaim-poana ao anatin'ny  andro.
Ho an'ny fanontaniana rehetra mifandraika amin'ny angon-drakitrao, na ny fangatahana fangatahana, mifandraisa aminay:
Tendrombohitra: + 1 (800) 959-8819
Tompon'andraikitra amin'ny politikantsika manokana isika.
Azontsika atao ny mifandray amin'ny tranokala hafa. Zava-dehibe ny manamarina ny politikany manokana ary manamarina fa ny tranonkala hafa dia ny GDPR mifanaraka amin'ny fandefasana ny mombamomba azy manokana.
Tsy manaiky andraikitra na andraikitry ny olon-kafa izahay.
Cookies ampiasaina amin'ny fanomezan-dàlanao, izy ireo dia rakitra kely eo amin'ny solosainao izay mamantatra anao amin'ny tranokalanay.
Karazana cookies ampiasaintsika
Website Analytics: dia manome ny isan'ny mpitsidika, ny fahazoana mivezivezy amin'ny fifamoivoizana ary ny fitondran-tena ao anatiny mba hanatsarana ny traikefa amin'ny varotra sy ny mpampiasa.
Tetikasan-tsarimihetsika: rakitso ireo hetsika nalaina tao amin'ny vohikalantsika tahaka ny votoaty narahinareo ary ny rohy misy anao. Mampiasa izany isika mba hanatsarana ny votoatin'ny hafatra sy ny fitaovana.
Ny cookies fahatelo izay mety hapetraka ao amin'ny tranokalanay dia ahitana:
Ny Google Analytics dia manangona angon-drakitra tsy miankina momba ny fampiasana tranonkala araka ny politikany manokana: www.google.com/policies/privacy/
Ny cookie Remarketing an'ny Google dia manome fomba iray hanatsarana ny votoaty natolotra anao noho ny tantaran'ny tranonkalanay. Azonao atao ny miala amin'izany ao amin'ny Google Ad Settings.
SalesForce no rafitra CRM ary ny cookies dia ahafahantsika mitantana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa momba ny fangatahana fampahalalana sy ny baiko momba ny fanompoana.
Wordfence dia safidin'ny WordPress Security izay mampiasa cookie mba hamaritana raha olona mpampiasa ianao.
Ny Facebook Pixel dia manome fanadihadiana momba ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala mba handrefesana ny fahombiazan'ny adiresy
Azonao atao ny manakana cookies amin'ny fanovana ny tranokalanao.
OffshoreCompany.com dia orinasa orinasa fa tsy orinasa lalàna. Tsy manome toro-hevitra ara-dalàna na ara-bola isika.
Raha manana fanontaniana, ahiahy, na fanehoan-kevitra momba ny politikantsika manokana na fomba fanao amin'ny fiainana manokana isika, dia tiantsika ny mahafantatra izay tena izy ireo. Mifandraisa aminay amin'ny 1-800-959-8819.